26.07.20 Avyakt Bapdada Nepali Murli 27.02.86 Om Shanti Madhuban
रूहानी सेना कल्प-कल्पका विजयी
सबै रूहानी शक्ति सेना, पाण्डव सेना, रूहानी सेना सदा विजयको निश्चय र नशामा रहन्छौ नि? अरू कुनै पनि सेनाले जब लडाई गर्छन्, विजयको निश्चय हुँदैन। निश्चय हुँदैन– विजय निश्चित नै छ भन्ने। तर तिमी रूहानी सेना, शक्ति सेनाहरू सदा निश्चयको नशामा रहन्छौ। केवल अहिलेको मात्र विजयी होइनौ, कल्प-कल्पका विजयी हौ। आफ्नो कल्प पहिलाको विजयका कथाहरू पनि भक्तिमार्गमा सुनिरहेका छौ। पाण्डवहरूको विजयको यादगार कहानी अहिले पनि सुनिरहेका छौ। आफ्नो विजयका चित्रहरू अहिले पनि देखिरहेका छौ। भक्तिमा केवल अहिंसकको बदला हिंसक देखाइदिएका छन्। रूहानी सेनालाई शारीरिक र साधारण सेना देखाइदिएका छन्। आफ्नो विजयको गायन अहिले पनि भक्तहरूद्वारा सुनेर हर्षित हुन्छौ। गायन पनि छ प्रभु-प्रीत बुद्धि विजयन्ती। विपरीत बुद्धि विनशन्ति। कल्प पहिलाको तिम्रो गायन कति प्रसिद्ध छ! विजय निश्चित भएको कारणले निश्चय बुद्धि विजयी छौ त्यसैले मालालाई पनि विजय माला भनिन्छ। त्यसैले निश्चय र नशा दुवै छ नि? कसैले सोधेमा निश्चयले भन्छौ– विजय त पहिला नै निश्चित छ। स्वप्नमा पनि यो संकल्प उठ्न सक्दैन थाहा छैन– विजय हुन्छ वा हुँदैन भन्ने, भइ नै सकेको छ। बितेको कल्प र भविष्यलाई पनि जान्दछौ। त्रिकालदर्शी बनेर त्यही नशाले भन्छौ। सबै पक्का छौ नि! यदि कसैले सोचेर जवाफ देऊ भनेमा के भन्छौ? अनेक पटक देखिसकेका छौं। कुनै नयाँ कुरा भए पो सोच्ने र हेर्ने। यो त अनेक पटकको कुरालाई अहिले रिपिट गरिरहेका छौ। त्यसैले यस्तो निश्चय बुद्धि तिमीहरू ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा हौ नि!
आज अफ्रीकाको ग्रुपको पालो हो। त्यसो त अहिले सबै मधुबन निवासी हौ। स्थायी ठेगाना त मधुबन हो नि। त्यो त सेवा-स्थान हो। सेवा-स्थान भयो अफिस, तर घर त मधुबन हो नि। सेवाको लागि अफ्रीका, यू.के. आदि चारैतर्फ गएका छौ। चाहे धर्म बदली गर्यौ, चाहे देश बदली गर्यौ तर सेवाको लागि नै गएका हौ। याद कुनचाहिँ घरको आउँछ? मधुबन वा परमधाम? सेवा स्थानमा सेवा गर्दा पनि सदा नै मधुबन र मुरली, यही याद रहन्छ नि! अफ्रीका पनि सेवा अर्थ गएका हौ। सेवाले ज्ञान गंगा बनाइदियो। ज्ञान गंगामा स्नान गरेर आज कति पावन बने! बच्चाहरूले भिन्न-भिन्न स्थानमा सेवा गरेको देखेर बापदादाले सोच्नुहुन्छ– बच्चाहरू कस्तो-कस्तो स्थानमा सेवाको लागि निर्भय बनेर धेरै लगनले रहेका छन्। अफ्रीकनहरूको वायुमण्डल, तिनीहरूको आहार व्यवहार कस्तो छ, तैपनि सेवाको कारणले त्यहाँ रहेका छन्। सेवाको बल मिलिरहन्छ। सेवाको प्रत्यक्ष फल मिल्छ, त्यो बलले निर्भय बनाउँछ। कहिलेकाहीँ आत्तिन्छौ कि? अफिसियल निमन्त्रणा पहिला यहाँबाट मिलेको हो। विदेश सेवाको निमन्त्रणा मिल्नाले यस्ता-यस्ता देशमा पुगेका छौ। निमन्त्रणाको सेवाको जग यहाँबाट नै सुरु भएको हो। सेवाको उमंग-उत्साहको प्रत्यक्ष फल यहाँका बच्चाहरूले देखाएका छन्। धन्य छ ती एक निमित्त बन्नेलाई जसले गर्दा कति राम्रा-राम्रा छिपेर रहेका रत्नहरू निस्किए। अहिले त धेरै वृद्धि भएको छ। तिनी छिपे र तिमीहरू प्रत्यक्ष भयौ। निमन्त्रणाको कारणले नम्बर अगाडि भयो। त्यसैले बापदादाले अफ्रीकालाई आफरिन (स्याबासी) लिनेवाला भन्नुहुन्छ। स्याबासी लिने स्थान हो किनकि वातावरण अशुद्ध छ। अशुद्ध वातावरणको बीचमा वृद्धि भइरहेको छ। त्यसका लागि स्याबास भनिन्छ।
शक्ति सेना र पाण्डव सेना दुवै नै शक्तिशाली छन्, धेरैजसो भारतीय छन्। तर भारतबाट दूर भएका छन्, दूर भए तापनि आफ्नो हक त छोड्न सक्दैनन्। त्यहाँ पनि बाबाको परिचय मिल्यो। बाबाको बने। नैरोबीमा मेहनत लागेन। सजिलै बिछोड भएकाहरू पुगे र गुजरातीहरूको यो विशेष संस्कार पनि हो। जस्तै तिनीहरूको यो रीति हुन्छ– सबै मिलेर गर्बा रास गर्छन्। एक्लै गर्दैनन्। सानो होस् चाहे ठूलो होस् सबै मिलेर गर्बा नाँच अवश्य गर्छन्। यो संगठनको निशानी हो। सेवामा पनि देखिने गर्छ– गुजरातीहरू संगठनवाला हुन्छन्। एउटा आए भने १० लाई अवश्य ल्याउँछन्। यो संगठनको रीति तिनीहरूमा राम्रो छ। त्यसैले वृद्धि चाँडै हुन्छ। सेवाको वृद्धि र विस्तार पनि भइरहेको छ। यस्ता स्थानहरूमा शान्तिको शक्ति दिनु र भयको बदलामा खुसी दिलाउनु यही श्रेष्ठ सेवा हुन्छ। यस्तो स्थानमा आवश्यकता हुन्छ। विश्व कल्याणकारी हौ त्यसैले विश्वको चारैतिर सेवा बढ्नु छ र निमित्त पनि बन्नु नै छ। कुनै पनि कुना बाँकी रह्यो भने गुनासो गर्ने छन्। राम्रो छ, हिम्मते बच्चे मदते बाबा हुनुहुन्छ। सहयोगी हातहरू पनि त्यहीँबाट निस्किएर सेवा गरिरहेका छन्। यो पनि सहयोग भयो नि। स्वयं जाग्छौ भने धेरै राम्रो तर जागेर फेरि जगाउन पनि निमित्त बन्छौ भने डबल फाइदा हुन जान्छ। धेरैजसो सहयोगीहरू पनि त्यहीँका नै छन्। यो विशेषता राम्रो छ। विदेश सेवामा धेरैजसो सबै त्यहीँबाट निस्किएर त्यहीँ नै सेवाको लागि निमित्त बन्छन्। विदेशले भारतलाई सहयोगी दिएका छैनन्। भारतले विदेशलाई दिएको छ। भारत पनि धेरै ठूलो छ। अलग-अलग जोन छन्। स्वर्ग त भारतलाई नै बन्नु छ। विदेश त पिकनिक स्थान बन्छ। त्यसैले सबै सदा तयार छौ नि! आज जसलाई जहाँ पठाए पनि तयार छौ नि! जब हिम्मत राख्छौ, मदत पनि मिल्छ। सदा तयार अवश्य रहनु छ। जब समय त्यस्तो आउँछ अनि आदेश त दिनै पर्ने हुन्छ। बाबाद्वारा आदेश त हुनु नै छ। कहिले गर्नुहुन्छ, त्यो मिति बताइँदैन। मिति बतायो भने त सबै नम्बर वनमा पास हुन्छन्। यहाँ मितिको नै अचानक एउटै प्रश्न आउँछ! सदा तयार छौ नि। यहाँ नै बस्नु छ भनियो भने बाल-बच्चा, घर आदि याद आउँछ? सुखका साधन त त्यहाँ छन् तर स्वर्ग त यहाँ बन्नु छ। त्यसैले सदा तयार रहनु ,छ यो हो ब्राह्मण जीवनको विशेषता। आफ्नो बुद्धिको लाइन क्लियर होस्। सेवाको लागि निमित्त मात्र स्थान बाबाले दिनुभएको छ। त्यसैले निमित्त बनेर सेवामा उपस्थित भएका छौ। जब बाबाको इशारा मिल्छ तब केही पनि सोच्ने आवश्यकता नै पर्दैन। निर्देशन प्रमाण सेवा राम्रो गरिरहेका छौ त्यसैले न्यारा र बाबाको प्यारा छौ। अफ्रीकाले पनि वृद्धि राम्रो गरेको छ। भी.आई. पी.को सेवा राम्रो भइरहेको छ। सरकारसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छ। यो विशेषता छ जुन सबै वर्गका आत्माहरूको सम्पर्कले कुनै न कुनै समयमा समीप लिएर नै आउँछ। आजका सम्पर्कवाला भोलि सम्बन्धवाला हुनेछन्। तिनीहरूलाई जगाइरहनु छ। नत्र अलिकति आँखा खोलेर फेरि सुत्छन्। कुम्भकर्ण त हुन् नै। निद्राको नशा भयो भने जे पनि खान-पिउन सक्छन् अनि भुल्छन्। कुम्भकर्ण पनि यस्तै हुन्छ। भन्छन्– हुन्छ फेरि आउँला, यस्तो गरौंला। तर फेरि सोध्यो भने भन्छन्– यादै भएन। त्यसैले बारम्बार जगाउनु पर्छ। गुजरातीहरूले बाबाको बन्न, तन-मन-धनले स्वयंलाई सेवामा लगाउन नम्बर राम्रो लिएका छन्। सजिलै सहयोगी बन्छन्। यो पनि भाग्य हो। संख्या पनि गुजरातीहरूको राम्रो छ। बाबाको बन्ने चिट्ठा कुनै कम होइन।
हरेक स्थानमा कोही न कोही बाबाका बिछोडिएका रत्नहरू त छन् नै। जहाँ पाउ राखे पनि कोही न कोही निस्कन्छन् नै। निश्चिन्त र निर्भय भएर सेवामा लगनले अगाडि बढ्यौ भने पदमगुणा मदत पनि मिल्छ। अफिसियल निमन्त्रणा त फेरि पनि यहाँबाटै आरम्भ भएको हो। जे भए पनि सेवाको खाता जम्मा त भयो नि। त्यो जम्मा गरेको खाताले समयमा खिच्ने छ अवश्य। त्यसैले सबै नम्बरवन, तीव्र पुरुषार्थी स्याबासी लिनेवाला हौ नि। नम्बरवन सम्बन्ध निर्वाह गर्नेहरू, नम्बरवन सेवामा सबूत देखाउनेहरू सबैमा नम्बरवन हुनु नै छ, तब त स्याबासी लिन्छौ नि। धेरै स्याबासी लिँदै रहनु छ। सबैको हिम्मत देखेर बापदादा खुसी हुनुहुन्छ। अनेक आत्माहरूलाई बाबाको सहारा दिलाउनको लागि निमित्त बनेका छौ। राम्रा परिवारका परिवार छन्। परिवारलाई बाबाले गुलदस्ता भन्नुहुन्छ। यो विशेषता पनि राम्रो छ। त्यसो त सबै ब्राह्मणहरूको नै स्थान हो। कोही नैरोबी गए पनि जहाँ गए पनि भन्नेछन् हाम्रो सेन्टर हो, बाबाको सेन्टर हो। हाम्रो परिवार हो। त्यसैले कत्ति भाग्यशाली भयौ! बापदादा हरेक रत्नलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ। चाहे कुनै पनि स्थानका हुन् तर बाबाका हुन् र बाबा बच्चाका हुनुहुन्छ। त्यसैले ब्राह्मण आत्माहरू अति प्रिय छन्। विशेष छन्। एक अर्का भन्दा प्यारा छन्। अच्छा।
अब रूहानी व्यक्तित्वद्वारा सेवा गर (चुनिएका अव्यक्त महावाक्यहरू )
तिमी ब्राह्मणहरूको जस्तो रूहानी व्यक्तित्व सारा कल्पमा अरू कसैको पनि हुँदैन किनकि तिमीहरू सबैको व्यक्तित्व बनाउनेवाला उच्च भन्दा उच्च स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ। तिम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यक्तित्व हो– सपनामा वा संकल्पमा पनि सम्पूर्ण पवित्रता। यो पवित्रताको साथ-साथमा चेहरा र चलनमा पनि रूहानियतको व्यक्तित्व छ। आफ्नो यो व्यक्तित्वमा सदा स्थित रह्यौ भने सेवा स्वत: हुन्छ। कोही जस्तोसुकै चिन्तामा होस्, अशान्त आत्मा होस् तर तिम्रो रूहानी व्यक्तित्वको झलकले, प्रसन्नताको नजरले तिनीहरूलाई प्रसन्न गर्नेछ। नजरबाट निहाल हुनेछन्। अहिले समयको समीपता अनुसार नजरद्वारा निहाल गर्ने सेवाको समय हो। तिम्रो एक नजरले तिनीहरू प्रसन्नचित्त हुनेछन्, दिलको आशा पूर्ण हुनेछ।
जसरी ब्रह्मा बाबाको चलन र चेहरामा व्यक्तित्व थियो, त्यसैले तिमीहरू सबै आकर्षित भयौ। त्यस्तै बाबाको अनुसरण गर्नु छ। सर्व प्राप्तिको लिस्ट बुद्धिमा इमर्ज रह्यो भने चलन र चेहरामा प्रसन्नताको व्यक्तित्व देखिन्छ र यो व्यक्तित्वले हरेकलाई आकर्षित गर्नेछ। रूहानी व्यक्तित्वद्वारा सेवा गर्नको लागि आफ्नो अवस्था सदा हर्षित र हल्का राख्नु छ। अवस्था बदलिनु हुँदैन। कारण जे सुकै होस्, त्यो कारणको निवारण गर्नु पर्छ। सदा प्रसन्न व्यक्तित्वमा रहनु छ। प्रसन्नचित्त रहनाले धेरै राम्रो अनुभव गर्नेछौ। प्रसन्नचित्त आत्माको सङ्गमा रहन, उनीहरूसँग कुरा गर्न, बस्न सबैलाई राम्रो लाग्छ। त्यसैले लक्ष्य राख– प्रश्नचित्त होइन, प्रसन्नचित्त रहनु छ।
तिमी बच्चाहरू बाहिरी रूपमा साधारण व्यक्तित्ववाला नै देखिन्छौ तर रूहानी व्यक्तित्वमा सबैभन्दा नम्बरवन छौ। तिम्रो चेहरामा, चलनमा पवित्रताको व्यक्तित्व छ। जति-जति जो पवित्र हुन्छन् त्यति तिनीहरूको व्यक्तित्व न केवल देखिन्छ, अनुभव पनि हुन्छ र त्यही पवित्रताले नै सेवा पनि गर्छ। जो उच्च व्यक्तित्ववाला हुन्छन्, तिनीहरूको कहीं पनि कसैमा पनि दृष्टि जाँदैन किनकि तिनीहरू सर्व प्राप्ति सम्पन्न हुन्छन्। तिनीहरूले कहिल्यै आफ्नो प्राप्तिको भण्डारमा कुनै अप्राप्ति अनुभव गर्दैनन्। तिनीहरू सदा मनबाट भरपुर भएको कारणले सन्तुष्ट रहन्छन्, यस्ता सन्तुष्ट आत्माहरूले नै अरूलाई सन्तुष्ट गर्न सक्छन्।
जति पवित्रता हुन्छ त्यति ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व हुन्छ, यदि पवित्रता कम छ भने व्यक्तित्व पनि कम हुन्छ। यो पवित्रताको व्यक्तित्वले सेवामा पनि सजिलै सफलता दिलाउँछ। तर यदि एउटा विकारको अंश-मात्र पनि छ भने अरू साथीहरू पनि उसको साथमा अवश्य हुन्छन्। जसरी पवित्रताको सुख-शान्तिसँग गहिरो सम्बन्ध छ, त्यसैगरी अपवित्रताको पनि पाँच विकाहरूरसँग गहिरो सम्बन्ध छ। त्यसैले कुनै पनि विकारको अंश-मात्र नरहोस् तब भनिन्छ पवित्रताको व्यक्तित्वद्वारा सेवा गर्नेवाला।
आजकल दुई प्रकारका व्यक्तित्वको गायन छ– एक शारीरिक व्यक्तित्व, अर्को पदको व्यक्तित्व। ब्राह्मण जीवनमा जुन ब्राह्मणमा सन्तुष्टताको महानता हुन्छ तिनीहरूको चालचलनमा, तिनीहरूको अनुहारमा सन्तुष्टता र श्रेष्ठ स्थितिको व्यक्तित्व देखिन्छ। जसको नयन-चैनमा, अनुहारमा, चालचलनमा सन्तुष्टताको व्यक्तित्व देखिन्छ तिनीहरू नै तपस्वी हुन्। तिनीहरूको चित्त सदा प्रसन्न हुन्छ, दिल-दिमाग सदा आराममा, सुख-चैनको स्थितिमा हुन्छ, कहिल्यै बेचैन हुँदैनन्। हरेक बोली तथा कर्मले, दृष्टि र वृत्तिले रूहानी व्यक्तित्व र रोयल्टीको अनुभव गराउँछ।
विशेष आत्माहरूलाई तथा महान आत्माहरूलाई देशको अथवा विश्वको पर्सनालिटी भनिन्छ। पवित्रताको व्यक्तित्व अर्थात् हरेक कर्ममा महानता र विशेषता होस्। रूहानी व्यक्तित्व भएका आत्माहरूले आफ्नो शक्ति, समय र संकल्प खेर फाल्दैनन्, सफल गर्छन्। यस्ता व्यक्तित्व भएकाहरूले कहिल्यै पनि सानो-सानो कुरामा आफ्नो मन-बुद्धिलाई व्यस्त राख्दैनन्। रूहानी व्यक्तित्व भएका विशेष आत्माहरूको दृष्टि, वृत्ति, बोली.... सबैमा अलौकिकता हुन्छ, साधारणता हुँदैन। साधारण कार्य गर्दा पनि शक्तिशाली, कर्मयोगी स्थितिको अनुभव गराउँछन्। जसरी ब्रह्मा बाबालाई देख्यौ– चाहे बच्चाहरूको साथमा तरकारी पनि काट्नुहुन्थ्यो, खेल पनि खेल्नु हुन्थ्यो तर उहाँको व्यक्तित्वले सदा आकर्षित गरिरह्यो। त्यसैले बाबालाई अनुसरण गर।
ब्राह्मण जीवनको व्यक्तित्व “प्रसन्नता” हो। यो व्यक्तित्वलाई अनुभवमा ल्याउनु छ र अरूलाई पनि अनुभवी बनाउनु छ। सदा शुभ-चिन्तनले सम्पन्न रहनु छ, शुभ-चिन्तक बनेर सबैलाई स्नेही, सहयोगी बनाउनु छ। शुभ-चिन्तक आत्मा नै सदा प्रसन्नताको व्यक्तित्वमा रहेर विश्वको अगाडि विशेष व्यक्तित्ववाला बन्न सक्छ। आजकल व्यक्तित्व भएका आत्माहरू नै प्रसिद्ध बन्छन् अर्थात् नाम चलेका हुन्छन् तर तिमी रूहानी व्यक्तित्ववाला केवल प्रसिद्ध अर्थात् गायन-योग्य होइन, गायन योग्यको साथमा पूज्यनीय पनि बन्छौ। जतिसुकै ठूलो धर्म-क्षेत्रका, राज्य-क्षेत्रका, विज्ञानको क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू प्रसिद्ध भएका छन् तर तिमी रूहानी व्यक्तित्व समान ६३ जन्म पूज्यनीय भने बनेका हुँदैनन्। अच्छा।
रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई याद-प्यारा एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिद्वारा श्रेष्ठ स्थितिको सीटमा सेट रहने सदा सम्पन्न भव
संगमयुगमा शिव शक्तिको कम्बाइन्ड स्वरूपको स्मृतिमा रहनाले हरेक असम्भव कार्यहरू पनि सम्भव हुन्छन्। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हो। यस स्वरूपमा स्थित रहनाले सम्पन्न भवको वरदान मिल्छ। बापदादले सबै बच्चाहरूलाई सदा सुखदायी स्थितिको सीट दिनुहुन्छ। सदा यही सीटमा सेट रह्यौ भने अतीन्द्रिय सुखको झुलामा झुलिरहने छौ, केवल विस्मृतिको संस्कारलाई समाप्त गर।
शक्तिशाली वृत्तिद्वारा आत्माहरूलाई योग्य र योगी बनाउनु छ।